Maamulka Deg Xamarweyne oo Howlgalo ku soo qabtay Maandooriye & ragii sameynayay – SBC
Maamulka Deg Xamarweyne oo Howlgalo ku soo qabtay Maandooriye & ragii sameynayay
Posted by Webmaster on June 5, 2012 Comments
Ciidamada Maamulka Demada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayaa howl ay ka sameeyeen degmadaasi waxa ay gacanta ku soo dhigeen Waxyaabaha maanta dooriya oo ay sameynayeen dad qeybo ka mid ah degmadaas.
C/laahi Ibraahim Sahal Gardhub gudoomiyaha Degmada Xamarweyne iyo Saraakiisha Police-ka Degmadaasi ayaa warfidiyeenada kula hadlay xarunta degmadaasi, waxaana ay sheegeen in Ciidamada Howl galada ay sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen Waxyaabaha maanka dooriya oo u badnaa nooca looyaqaan Calaq, Xashiishado iyo Qamri.
Gudoomiyaha Degmada Xamarweyne ayaa sheegay in sidoo kale ay gacanta ku soo dhigeen dadkii sameynayay oo qaab ganacsi ahna uga waday degmada kuwaasi oo isugu jira Rag iyo Haween Iminkadana ay xabsiga ku jiraan.
Saraakiisha Police-ka ayaa iyana sheegay in dadkani la soo qabtay sida ugu dhaqsiyaha badan lagu qaadayo xukun sharci ah ayna iminka soconeyso su’aalo weydiimo lagu wado.
Ma ahan markii ugu horeysay oo uu Maamulka Degmada Xamarweyne Baaritaano uu ka sameeyo deegaankaas ay ku soo qabqabtaan Waxyaabaha maanka dooriya kuwaas oo qeyb ka ah amaan xumida ka jirta magaalada Muqdisho.
degmada xamarwayne,ee magaalada mogadisho,dadkii ku noolaa ee reer banaadiriga,ahaa inta badani waa ka carareen,guryahooddii,waxaana xoog ku qabsaday,taageerayaashii falaagaddii usc da, degmaddasi oo lahayd ilbaxnimo qadiimi ah oo soo jireen,waxaa ku yaala masaajido la dhisay ku dhawaad kun sanno ka hor.kuwa maandooriyaasha iyo xashiiska iyo qamriga samayna waa jirigii ka haray,maleeshiyaaddkii dad iyo dalba baabi’yey ee usc da,waa xaq daro weli socota in dadkii,reer banaadirka ahaa,intii ka hartay,aan xitaa,loo ugolayn in ay degmadooda gudoomiye ka noqdaan,waa cadaalad darida ay caanka ku yihiin,reer usc,shaki kuma jiro in Jaalle sahal oo ka mid,ahaa mooyaantii,USC da,dadkii uu dhacay oo uuu bara kiciyey ayaa gudoomiye looga dhigay wataas cadaalada reer USC.